“हामी पनि आदिवासी जनजाति” भन्दै बाहुन क्षेत्री आन्दोलनमा | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← भालेको झिल्के प्वाँखमा पोथीहरु भुतुक्कै
Kuwait to reject visit visa to Dalai Lama →
पूर्वका ११ जिल्लामा खम्बुवान राज्य चाहियो भन्दै आन्दोलन जारी छ । मधेश सिंगैलाई मधेश स्वायत्त राज्य बनाउनुपर्‍यो भनिरहेका छन् । उता पश्चिम तराइका जिल्लासहित चितवनसम्म थारुहरुको राज्य चाहियो भनेर थारुहट आन्दोलन मच्चिएकै छ । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर लगायतका जिल्ला समेटेर नेवार राज्य माग्नेको घुर्कीपनि कम छैन । पश्चिमतिर मगर राज्य, पूर्वमा तामाङराज्य । कतै लिम्बूवान राज्यको नारा ।
अनेक जात, जाति, भाषा, थर र समूदायले सिंगारिएको नेपाल । सबैले आआफ्नो राज्य मागेपछि बाहुन र क्षत्री कहाँ जाने ? त्यसैले त्यसरि जातिय राज्य माग्नेहरुको भिडमा अब खस र क्षेत्रीहरुपनि उत्रिएका छन् । बरु उनीहरुले दाबी गरेका छन् – हामीपनि आदिवासी जनजातिनै हो ।
अहिलेसम्म थारु, धिमाल, कुमाल, राइ, लिम्बु, शेर्पाहरुले ‘हामीहरु आदिबासी जनजाति हौं’ भन्दै आएको सुनिएको हो । खस र क्षेत्रीले न त्यो दाबी गरेका थिए न अरुलेनै भन्थे ‘खस क्षेत्री आदिवासी जनजाति’ भनेर । तर खस क्षेत्रीपनि हिजो देखि स्पष्ठसित मैदानमा उत्रिए, ‘हामीपनि आदिवासी जनजाति’ भन्दै । दाबी मात्रै हो र ? अब उनीहरुले बिभिन्न माग राखेर चरणबद्द आन्दोलनकै घोषणा गरेका छन् ।
उता नयाँ बन्ने संविधानमा आफ्नो समूदायको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्दै क्षेत्री समाज नेपालले हिजो राप्ती अञ्चलका पाँच जिल्ला बन्द गरयो । सास्ती भोगे जनताले । दाङ, रोल्पा, रुकुम, सल्यान र प्युठान जिल्ला नराम्ररी प्रभावित भए । गाडी चल्न दिएनन्, स्कूल पसल सारा बन्द गराए । त्यसमा बाहुन लगायतका अन्य केहि जातपनि हरुपनि मिसिएर साथ दिए ।
राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरे हिजो खस र क्षत्रीहरुले । उनीहरुले आफूहरुपनि यो देशको आदिवासी र जनजातिनै भएको दाबी गरेर त्यसलाई संविधानमा सुरक्षित गर्नुपर्ने माग राखे । यस अघि अल्पसंख्यक र के के जनजातिलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आरक्षण दिँदै आएको सुनिएकोमा बाहुन क्षेत्रीले त्यसलाई घुमाउरो तरिकाले विरोध जनाउँदै जातिय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेका छन् ।
त्यति मात्रै हो र ? अरु जातिले आरक्षण पाउने भए हाम्ले चाहिँ किन नपाउने नी भन्दै आरक्षण समेत मागेका छन् । प्राक्रितिक स्रोत र साधनमाथिपनि बाहुन र क्षेत्रीको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग थपेका छन् । उनीहरुले त्यो पुरा गराउन धर्ना, जुलुस, संविधान सभा भवन अगाडि कोणसभा आदि कार्यक्रम् घोषणा गरेका छन् । आन्दोलन चर्काउन भनेर खस क्षत्री संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलन परिचालन समितिपनि गठन गरेका छन् । आफ्ना माग पुरा नभए अझ कडा आन्दोलन ल्याउने रे । के सम्म गर्ने हुन् त्यो कडा चाहिँ थाह छैन ।
अहिलेसम्म जनजाति, आदिवासी भनेर जे सुनिँदै र बुझिँदै आइएको थियो अब त्यस्तो रहेन । आरक्षणको व्यवस्था जसलाई दिने बहस सुनिथ्यो त्योपनि तिनमा सिमित रहेन । सायद अरु सबै जातिहरुले आआफ्नो राज्य खडा गर्ने, आआफ्ना जात र जातिको लागि अधिकार लिने र देशको सबै जस्तो भाग अंश लगाउन लागेझैं गरेको देखेर आफ्नो अस्तित्व र अधिकार गुम्ने भो भन्ने महसुस गरेको हुनु पर्छ खस क्षेत्रीहरुले । त्यसैले अब बाहुन र क्षेत्रीपनि घोषित रुपमै उठे ।